Jatta Wöötanö: “Haino aman-jery niomerika, fahafahana lehibe ho an’ireo Vondrompiarahamonina Teratany” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jona 2019 9:25 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny 12 Mey 2015)
Fanavazaombaovaon'ny tetikasa nahazo ny fanampiana ara-bolan'ny Rising Voices
Sary nampiasaina tamin'ny fahazoana alalana
Haino aman-jery nomerika ary tetikasa fampiofanana TIC natao ho an'ireo tanora teratany ao amin'ny vondrona ara-poko Yekuana any Venezoela ny Jatta Wöötanö. Ny Yekuana dia fiarahamonina ahitana mpivezivezy amin'ny renirano miorina eny amin'ireo morondrenirano isan-karazany ao Orinoco, izay mandrakotra eo amin'ny 30 000 km² amin'ny tany ao amin'ny Fanjakana Venezoeliana any Bolívar sy Amazonas ary koa any amin'ny faritra maro any Avaratr'i Brezila .
Ao anatin'ireo hetsika fampiofanana tanora, nikarakara andiana atrikasa maro fampiofanana momba ny haino aman-jery nomerika tao amin'ny foiben-toeran'ny Fikambanana Kuyujani ilay tetikasa, vondrona natokana ho fanohanana ireo vondrompiarahamonina Sánema sy Yekuana avy ao amin'ny lembalemban'ny renirano Caura ao amin'ny fanjakana Venezoeliana ao Bolívar.
Namporisihan’ ireo atrikasa ireo ny mpandray anjara mba hiresaka momba ireo haino aman-jery nomerika amin'ny fomba mahitsy sy voasaina tsara, satria mizara ny tantaram-piainany sy ny an'ireo vondrompiarahamonina amin'ny alalan'ny blaogy, tambajotra sosialy sns… izy ireo.
Nisahana ny andraikitra tamin'ny famoronana ilay fandarahanasa fampiofanana ny mpampianatra sady mpanabe Danny Franco, matihanina amin'ny teknolojiam-pampianarana. Mikasika io asa io, hoy izy amintsika:
Tena nahaliana sy nahaizana zavatra maro izany asa izany. Tamin'ireo tanjon'ilay ekipa sy ilay tetikasa, nezahanay ny hamorona fandaharanasa fampiofanana mifanaraka amin'ireo zava-misy iainan'ireo teratany mpandray anjara. Noho izany, nifantoka tamin'ny fomba fijery roa manokana izahay: ny fampiasana ny fitaovana teknolojika toy ny solosaina, ny finday , ny tablety nomerika sns, ary koa, tamin'ny fahafahana miditra amin'ireo haino aman-jery nomerika sy ny fitantanana ny votoatin'ireo blaogy sy tambajotra sosialy. Tetsy andaniny, nasongadinay ihany koa ireo zavatra rehetra nikasika ny fampiasana tsara indrindra ireo fitaovana fifaneraserana ireo any anatin'ny sehatr'ireo vondrom-piarahamonina teratany ireo sy ny fomba fijeriny izao tontolo izao.
Mpampianatra ao amin'ny Oniversiten'ny Teratany ao Venezoela efa ho enina taona mihoatra izao i Franco. Nandritra izany vanim-potoana izany, nahazo ireo traikefa ilaina mba hahatakarana sy hanànana ny fahalefahana ilaina mba hiasana miaraka amin'ireo mponina teratany izy.
Heveriko fa sady mahaliana no sarotra be ny olana momba ireo teratany. Na any Venezoela aza, miaro ireo mponina teratany amin'ny fomba manokana ny Lalàm-panorenana sy ireo lalàna nasionaly, mbola tsy ampy hetsika marim-pototra ihany io manoloana ireo tranga manokana toy ilay vao nitranga vao haingana tao amin'ny lembalemban'ny renirano Caura, izay nikitihana ny zon'ireo vondrom-piarahamonina ao amin'ny foko Sánema sy Yekuana tamin'ny alalan'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sy ny fikarakarana tsy mendrika nataon'ireo manampahefana. Tonga saina izahay ankehitriny fa tena fahafahana lehibe ho an'ireo vondrom-piarahamonina teratany sy ny mpikambana ao aminy ny haino aman-jerim-pifandraisana sosialy, indrindra ny haino aman-jery nomerika mba hizaran'izy ireo ny tantarany hahafantaran'ny tontolo tsy teratany mahafantatra ny zava-mitranga.
Hanohy ireo hetsika fampiofanany ny tetikasa Jatta Wöötanö mandritra ny volana Mey manontolo noho ny fangatahana marobe avy any anivon'ireo vondrom-piarahamonina Yekuana. Afaka tsidihanao ny blaogin'ilay tetikasa izay hahafahanao miditra amin'ny blaogin'ireo mpandray anjara tsirairay sy ny fitaovana mikasika ny fampahalalam-baovaoa maromaro novokarina hatreto.